Milton Glaser oo ah naqshadeeyaha ka dambeeya waan jeclahay New York | Abuurista khadka tooska ah
Milton Glaser oo ah naqshadeeyaha ka dambeeya waan jeclahay New York
Pablo Gonder | | dhowr
Milton Glaser oo ah naqshadeeyaha ka dambeeya waan jeclahay New York waa isbarasho naqshadeeye iyo sawirqaade Waxaan calaamadeeyaa kahor iyo kadib New York mahadnaqiddan cajiibka ah soo jeedin olole ka yimid magaaladan.
Weedh fudud oo qalbi leh maaraysay nuxurka rabitaanka ka mid ahaanshaha magaalada weyn ee New York. Olole xayeysiis ah oo run noqon lahaa Astaanta New York iyo meelo kale oo hadhow nuqul ka sameysan doona naqshaddaas si loogu isticmaalo magaalooyinkooda.
El naqshadeeye gadaashiisa Waan jeclahay New York waa naqshadeeyaha caanka ah Milton Glaser, Wuxuu ku dhashay magaalada New York sanadkii 1929-kii, naqshadeeye iyo sawir-bixiyehan ayaa horeyba uga soo muuqday a tiro badan oo mashaariic garaaf ah laakiin shaqadani waxay astaan ​​adag ka dhigaysaa in la ilaawo.
Naqshadeynta Glaser waa sir ah iyada oo loo marayo soo gaabinta iyo adeegsiga astaan (wadnaha) sida soo jiidashada garaafka ugu weyn. Waa naqshad fudud oo isha gasha laga bilaabo isla marka aad aragto illaa inta aad farriinta ka bixinayso. Isbaanishka «Waan jeclahay New York» wuxuu gudbiyaa fikradda ah jecel meel, jecel magaaladaas aan ku nool nahay. Xaqiiqdii waa mashruuc muuqaal ah oo muuqaal ah Hay'adda Wells Rich Greene.
Naqshaddani waxay ahayd loo isticmaalay sidii xusuus ahaan noocyada kala duwan ee walxaha dalxiis ee astaanta u ahayd soo jiidashada muuqaalka ugu weyn. Maanta waa suurtagal in laga helo astaanta a tiro alaab dalxiis ah, xitaa magaalooyin kale way soo guuriyeen fikradda waxayna ku isticmaaleen magaca magaaladooda.
El sawir asalka ah astaantan waxaan ka heli karnaa inay si joogto ah u soo bandhigto eMatxafka Farshaxanka Casriga ah ee New York. Sawir deg deg ah oo ka tarjumaya nuxurka fikradda Glaser, abDib u eeg erayada una adeegso astaamaha wadnaha sida soo gaabinta muuqaalka ereyga JACAYL.
Iyadoo qayb ka ah Ololaha xayaysiinta Fiidiyowyo taxane ah ayaa loo sameeyay si kor loogu qaado Magaalada New York, oo ay ku jiraan a hees uu curiyey Steve Karmen.
Waxaan horeyba u ogaanay cidda ka dambeysa naqshaddan weyn ee calaamadeysay hor iyo ka dib Magaalada New York. muraayadaha la ogaan lahaa laga bilaabo wakhtigaas sida ninka wadnaha New York.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Milton Glaser oo ah naqshadeeyaha ka dambeeya waan jeclahay New York
GIMP waxay soosaarisay nooc cusub oo leh isbeddelo cusub oo qaabkeeda ah